Archive de l'auteur | NewsMada | Page 1552
Par Taratra sur 06/01/2016 Economie, NS Malagasy
Miverina misokatra ny 1 janoary teo ny taom-panjonoana lamatra (langouste) ho an’ity taona ity, nikatona nandritra ny telo volana (oktobra-desambra 2015). Nampiharina ity fepetra ity, nanomboka ny taona 2013, entina iarovana ny fitomboana ahafahan’ny makamba manatody sy manaranaka. Efa manana fe-potoam-panjonoana toy izao koa ny karazana trondro sy hazandranomasina hafa. Toy ny makamba (crevette), manomboka […]
Olana iray goavana niainana nandritra ny taona 2015, ny “delestazy”. Faritra 90 misy ny Jirama manerana ny Nosy nahita faisana tamin’izany avokoa. Nampikorontana ny fiaraha-monina, niteraka tsy fandriampahalemana ary indrindra nanapotika ny toekarena. Nisy vondrona mpianatra niaraka tamina mpandraharaha vitsivitsy, nanao kajikajy, nahita fa nahatratra 2.920 ora ny faharetan’ny delestazy manerana an’i Madagasikara tamin’ny taona […]
Par Taratra sur 06/01/2016 En Bref, NS Malagasy
Tafidina latsaky ny 7% (6,9%) ny tahan’ny fitomboan-karena tany Sina ny taona 2015 teo. Taha ambany indrindra io, hatramin’ny taona 2009. Nahatratra 11,6% izany ny taona 2006, ary niakatra 13% ny taona 2007. Ho an’ny taona 2010, nahatratra 10,3% ny fitomboan-karena. Izany hoe, ireo ilay lazaina fa nitombo “tarehimarika roa”, toy ilay vinavina sy fanambin’ny […]
Jeneraly no hanokatra ny taona etsy amin’ny Piment Café. Rehefa niato kely, hiverina indray ny “cabaret” fanao isaky ny zoma etsy Behoririka. Fantatra fa ny tarika Jeneraly hisantatra izany amin’ity taona ity, ny zoma ho avy izao, manomboka amin’ny 9 ora alina ny tarika Jeneraly. Fotoana iray indray hiaraha-mamerina ireo hiran’i Ghaby, izay nomen’ny tarika […]
Par Taratra sur 06/01/2016 NS Malagasy, NS-Culture
Fahombiazana ? Tsy fahombiazana ? Nety ? Tsy nety ?… Samy niezaka nanamarina ireo avokoa ny zava-nisy niainan’ny kolontsaina malagasy nandritra iny taona 2015 iny. Niraisana kosa ny alahelo tamin’ny tranga sasany. Nilaozan’ny feomanga ny hira malagasy ! Gina tanteraka ireo rehetra nahare fa nindaosin’ny fahafatesana tany Antsirabe i Andriamahatana Ridasoa na i Rida, mpikambana ao amin’ny tarika Ny Railovy, […]
Jery todika taona 2015 : fampihavanam-pirenena… nampisara-bazana ara-politika
Par Taratra sur 06/01/2016 NS Malagasy, NS-Politique
Mby aiza ny fampihavanam-pirenena natomboky ny FFKM? Niteraka fisaraham-bazana politika ny fehinkevitra na sosokevitra… Taorian’ny fampihaonana ireo filoha efa-tonta sy ny filohan’ny Tetezamita teo aloha, nanomboka ny 19 desambra 2014, mitohy ny asa fampihavanan’ny FFKM. Nisy, ohatra, ny fihaonana ny 13 sy 15 ary 16 janoary 2015. Na izany aza, teo ny fisintahan’ny filoha teo […]
Hidina an-dalambe indray ny Hetsika Madagasikara miaro ireo Nosy malagasy, ny 9 janoary ho avy izao, amin’ny fitakiana ireo Nosy malagasy manodidina, araka ny tapak’izy ireo teny Andravoahangy Ambony, omaly. Fanohizana ny fidinana an-dalambe ny 12 desambra 2015 izany. Hiainga eny Ambohijatovo ny diabe, hihazo ny araben’ny Fahaleovantena, ary hifarana eo anoloan’ny masoivoho frantsay, Ambatomena, […]
Fifidianana loholona : miaiky ny fahadisoana ny Ceni
“Maro ireo fahadisoana, fa mety misy ny tsy mbola zatra tamin’ireo mpikamban’ny biraom-pifidianana na noho ny fikoropahana”, hoy ny filoha lefitry ny Ceni, Rakotonarivo Thierry, teny Alarobia, omaly, momba ny fifidianana loholona. Misy tamin’ireo faritra sasany izay nahitana zavatra mila fanarenana sy fanitsiana. Anisan’izany, ohatra, ny nahitana biletà tokana misy famantarana manokana tsy araka ny […]
Tsy afaka ny hangina ka nanambatra ny heriny, omaly ireo kandidà loholona avy amin’ny antoko Tim, ny Mapar, MMM ary ny Marina. Narangarangan’izy ireo tamin’izany ny tranga niseho, mialoha sy nandritra ary taorian’ny fifidianana loholona farany teo. Manoloana izany, tsy eken’izy ireo ny voka-pifidianana. « Efa vonona ny porofo rehetra. Handeha amin’ny ambaratongam-pitsarana aloha izahay. […]
Rugby : hofoanana ary hosoloina ny fifaninanana “Top 14”
Par Taratra sur 05/01/2016 NS Malagasy, NS-Sports
Manomboka amin’ity taona 2016 ity, tsy hisy intsony ny fifaninanana “Top 14”. Hanana endrika vaovao mihitsy ny fiadiana ny ho tompondaka na ho an’ny ligin’Analamanga na ny fifaninanam-pirenena. Hiova ny fifaninanana eo amin’ny taranja rugby, manomboka amin’ity taom-pilalaovana 2016 ity. Araka izay efa nambaran’ny tomponandraikitra teo anivon’ny federasiona malagasin’ny rugby (FMR) mantsy, tsy hisy intsony […]
Mankalaza ny faha-80 tapna nijoroany ny Louveteaux ao anatin’ny Foibe Tily eto Madagasikara. Nanatanteraka lasin’ny Mpihaza izy ireo ny faran’ny taona teo tany Miarinarivo Itasy. Nahatratra 140 mahery ny Louveteaux tonga nanatrika izany lasy goavana izany. Nahatonga solontena avokoa ny sampana rehetra avy amin’ny faritra manerana ny Nosy. Raha ny fanazavana, lasy lehibe atrehin’ny solontenan’ny […]
Kitra atsy Afrika : misaona ny Elefantan’i Côte d’Ivoire
Sembain-drahona ny baolina kitra ivoarianina, ankehitriny. Nodimandry ny alakamisy 31 desambra lasa teo, tany Dusseldorf, Alemaina, mantsy i Steve Gohouri. Vodilaharan’ny Elefantan’i Côte d’Ivoire, teo aloha, ary nilalao tao amin’ny Steinbach, ekipa diviziona fahefatra any Alemaina izy. Araka ny tati-baovaon’ny polisy alemà, tsy hita efa nanomboka ny 12 desambra ny lehilahy. Tao anaty rano no nahitana […]
Nampiavaka iny taona 2015 iny teo amin’ny fiainan’ny mponina tamin’ny ankapobeny saika manerana ny Nosy ny fisian’ny tondra-drano sy ny tany nihotsaka vokatry ny ora-mikija nisesy. Betsaka, araka izany, ny traboina. Nahatratra 134.000 ireo traboina manerana ny Nosy raha ny tatitry ny minisiteran’ny Mponina. 60.000 tamin’ireo, avy eto Antananarivo avokoa. Mbola betsaka ireo fianakaviana tsy […]
Tahiry andramena : hahodina eto an-toerana ?
Par Taratra sur 05/01/2016 Economie, NS Malagasy
Maromaro ny paikady hapetraky ny fanjakana mikasika ireo tahiry andramena. Ho sazina mafy ireo mpanao trafika sy ny mpiara-mitsikomba ary hahodina eto an-toerana ny andramena, hitondra tombontsoa ho an’ny firenena. Andrasana ny fampiharana sy ny vokatra! Miandry ny didy avy amin’ny Fitsarana avo momba ny lalàmpanorenana (HCC), ny fankatoavan’ny Antenimierampirenena hananganana ny Fitsarana manokana mikasika […]
« Précédent 1 … 1 550 1 551 1 552 1 553 1 554 1 555 Suivant »